Uzimisele ngokuthola ikhambi lomdlavuza
UFISA ukuthola ikhambi lokwelapha umdlavuza uSithuthukile Makhanya othole iziqu zeBachelor of Health Sciences in Radiotherapy eDurban University of Technology izolo Isithombe: SITHUNYELWE
ZANELE MTHETHWA | June 11, 2020
SIGQUGQUZELWE uthando lokuthola ikhambi lokwelapha umdlavuza, isitshudeni saseDurban University of Technology, esithole iziqu zeBachelor of Health Sciences in Radiotherapy.
USithuthukile Charmaine Makhanya (22), ubeyingxenye yezitshudeni ezithweswe iziqu ngokwehlukile kwi-internet izolo njengoba izwe lisagonqile ngenxa yeCoronavirus.
Uphase ngamalengiso ezifundweni zakhe, wathola iCum Laude nomklomelo obizwa ngeDean’s Merit Award onikezwa abenze kahle.
Uthe ukuzikhandla nokuzimisela kwakhe yikona okwenze waphumelela ngamalengiso.
Okumethusile wukuthola umklomelo wokubongwa yisikhungo ngoba ubevele ezimisela.
“Angiyena owokuqala ukuthola iCum Laude emndenini. Engikujabulele kakhulu wukuthola iDean’s Merit Award ngoba bengingalindele. Kuthe uma ngithola lezi zindaba ngajabula kakhulu nomndeni wami uyaziqhenya ngalokhu.”
Yize yena ebengawulindele lo mklomelo, uthe abangani bakhe namalungu omndeni abamangalanga. Indlela ajabule ngayo uthe akakakholwa, usalokhu ebuyekeza lezi zindaba.
Nokho bekunezinselelo kuSithuthukile nabanye abebekulo mkhakha wakhe. Bekungokokuqala ukuthi kube nalo mkhakha kulesi sikhungo, okwenze kube nzima kakhulu kwabenza unyaka wokugcina. USithuthukile uyakufakazela ukuthi bekunezinselelo.
“Bekumele sifunde emini nantambama ngoba bese siqeqeshwa. Bekudingeka sibuye sihlangane ngamaqoqo senza ucwaningo, obekuwukhathaza kakhulu umqondo. Kube nzima nakakhulu kimina ngoba ngishonelwe ubaba, okwenze * -2018 ube wunyaka omubi kimina,” kusho yena.
Uthe akalilahlanga ithemba kunalokho uzitshele ukuthi kumele asebenze kanzima ukujabulisa uyise ongasekho. Uveze ukuthi lezi ziqu azitholile uzohlonipha yena ngazo ngoba ubemeseka kakhulu. Uzizwa sengathi uyamkweleta uyise njengoba ethi kuningi akudelile ezama ukuthi bathole imfundo engcono.
“Ubehlala njalo ethi ngo-2020 kuyobe kuwunyaka wami wokuthweswa iziqu,” kusho yena.
USithuthukile kumanje wenza umsebenzi womphakathi esibhedlela i-Addington njengomgomo walezi zifundo. Ukwenza lo msebenzi ukholwa wukuthi kuzomsiza kakhulu ezifisweni zakhe zokuthola ikhambi lomdlavuza. Ufisa nokuqhubeka enze izifundo zobudokotela ukuze agxile emkhakheni wokwelapha umdlavuza.
Ujabula abuye nganeno ngoba ubengalindele ukuthi usuku abelubheke ngabomvu lokuthweswa iziqu, ngeke lufane nolujwayelekile.
Uthe ubezimisele ngokuthi uyoxhawula kwiVice-Chancellor yesikhungo uSolwazi Thandwa Mthembu, okungasenzekanga ngenxa yobhubhane iCovid19.